Brainstorm enhances its Augmented Reality, Graphics and Template-based Solutions – NAB Show News by Broadcast Beat. Official Broadcaster of NAB Show, Producer of NAB Show LIVE
ikhaya » Ukudalwa kokuqukethwe » I-brainstorm iphakamisa i-Realhood Incredible, i-Graphics kunye neSetek-based based Solutions
I-brainstorm iphakamisa i-Realhood Incredible, i-Graphics kunye neSetek-based based Solutions
I-InfinitySet i-3 ithola i-newest Incredible Reality and Graphics.
I-Brainstorm iya kuqalisa i-SmartSet, isetekisi esisekelwe kwi-Template-Based Virtual Setter and Incmented Reality solution
I-brainstorm, inkampani ekhethekileyo yokubonelela nge-3D imifanekiso-mifanekiso kunye nezicwangciso zendlela ezenzileyo, eziswe kwi-NAB 2017 uphuculo olubalulekileyo kulo lonke uluhlu lwemveliso yalo, olwenzelwe ukuphucula i-Realment Incredible True and Graphics solutions. Ngenkampani engumlingani awuyikho, i-Brainstorm iya kuzisa VisualMedia, Isisombululo esihlangeneyo, esihlangeneyo sokwenza ngokubonakalayo ukubandakanya umxholo we-TV weNtlalo ngokusekelwe kwii-media media.
I-Brainstorm iya kubonisa nenkxaso I-hardware efana ne-Oculus Rift, Nangokuxhasa le ndlela entsha Ubuchwepheshe obunzulu, I-Brainstorm iya kuba negalelo ekutshintsheni umdlalo ngendlela umxholo ubonwa ngayo ekhaya.
InfinitySet 3 - IziThili eziMvelaphi kunye neNgeniso engathandekiyo
Kwi-NAB 2017 Brainstorm yaziswa InfinitySet 3, Inguqu yakutshanje yesisombululo sayo sesisombululo esilungileyo, esichaza ngoku Imifanekiso ephezulu kunye nezinto eziphathekayo. I-InfinitySet ngoku iquka i-graphics yezinto zokudala i-Aston, ngoko ikwazi ukuhlela, ukulawula nokudala I-2D / 3D imifanekiso yesikhalazo. Ezi zakhono zamatshini ezintsha zivumela i-InfinitySet 3 ukuba ihlele kuphela iiprojekthi ze-Aston kodwa zizinto ezizimele, izilwanyana, iStormLogic, izifo zedatha, njl njl, ngokungathi zise-Aston, okanye zenze izinto ezintsha kwi-composition, zihlele kunye . Oku kuthetha ukuba ekusebenziseni ukusasazwa, okanye ngexesha elingaphambili emoyeni, abaqhubi be-InfinitySet 3 baya kukwazi ukulungelelanisa nayiphi na into kwindawo, kwanabo banezakhiwo ezingeziwe ezifana neziboniso okanye iimveliso zedatha zangaphandle.
Iinkalo ezintsha, ezongezelelweyo eziphuculweyo ziye zaziswa kwi-NAB, kubandakanywa entsha VirtualGate Uphawu, oludibanisa umbonisi kungekhona kuphela kwisethi ebonakalayo kodwa kwakhona Ngaphakathi komxholo obongezelelweyo Ngaphakathi kuyo. Kanti olunye uphuhliso lweTheknoloji yeFreedomFree ™, i-VirtualGate ivumela italente kwilizwe elithengileyo ukuba lifakwe kwithetransport kwiphina ividiyo ngokuqhubeka ngokusasazeka. I-Brainstorm iya kubonisa kwakhona ubuchule bayo obude kunye nexesha elide ngokuphuhliswa kweendawo ze-3D ezithe ngqo kunye nokuqaliswa IvidiyoVIDE, i Isicelo seMixed Reality Usebenzisa izilwanyana kwisethi yangempela eyenza ifayile njenge-CAVE multiple window, enezinto ezibonakalayo ezivela kwiifestile ezibonakalayo kwiimeko zangempela njengoko zijongwa kwikhamera yokusasazwa.
I-Aston TrackAR-I-Realment Incredible Motion Graphics
I-Aston, ukudala imifanekiso yendalo, i-CG kunye nesisombululo sokudlala, iya kuvelisa entsha yayo TrackAR Inguqulo, eyenzelwe ngokukodwa Izicelo zangempela zengxubebo yangempela. I-Aston TrackAR iyahambelana nemimiselo yevidiyo elandeleleneyo, ivumela ukudala izicelo zangempela-zangaphakathi ezingenayo ukungathandwa kwabathengiyo ngokufaka izinto ezibonakalayo, imivalo yedatha, izibalo, njl., Kwividiyo ekutya, ukuhambelana nokuhamba kwayo nedatha yokulandelela efakwe kwi-movie.
Bhuqa kwaye ungalokothi uvakalise isisombululo esisisombululo sokubonelela Ixesha langempela le-3D ukubonakalisa imifanekiso esekelwe kwizibonelelo zeendaba zoluntu kwaye Idatha yesibini kwesikrini. I-VisualMedia idibanisa iimbini ze-Brainstorm ze-SmartTemplates ngokungabikho.
Inkxaso ye3rd Iqela linikezela ngeenjini
I-brainstorm iya kubonisa i-NAB yayo Inkxaso ye3rd Iqela linikezela ngeenjini, Unomdla okhethekileyo kumdlalo wokudlala kunye neenjini zokuzakhela njengaye Unreal Engine. Ezi iinjinjini ezinzima kakhulu zinika izicwangciso ze-photorealistic. Xa kudibene neBrainstorm iStudio inika injini, injini eyenziwa kakhulu kunye nenqobo kuyo yonke imveliso yenkampani, oku kwenza i-InfinitySet ingabonakali kuphela ukubonisa ngokugqithiseleyo iziganeko zangaphandle, kodwa kwakhona Ukudibanisa umzobos Iziganeko kwindawo yokugqibela, Njenge-3D iifayile ezihamba phambili, i-lower-thirds, i-tickers, i-CG kunye nezinye izinto.
Isisombululo esisekelwe kwisifanekiso
Kwi-NAB 2017 Brainstorm iya kukhutshwa SmartSet Isisombululo esisekelwe kwiphetshana esekelwe kwisetekethi esenzelwe izitulo ezincinci nakwii-TV zendawo, kwaye inikezela ngokusetyenzwa kweeNkcazo eziPhambili kunye neZingqinisiso ezingenzileyo ezingekho phantsi kwemfuneko yokudala iisethi ngokwazo. Izixazululo ze-Brainstorm ze-template zidlala umxholo womoya oye wadalwa ngokusebenzisa Iziboniso ezenziwe ngaphambili okanye ezenziwe ngenjongo Yenzelwe kwi-Brainstorm izicelo.
Ukudibanisa ne3rd Yekhompyutha
I-brainstorm iya kubonisa ukuhlanganiswa ne-3rd I-hardware yeqela efana neyo YE, NewTek kwaye Blackmagic Studio switchers. I-Brainstorm kunye ne-FOR-A banandipha ubuhlobo obude kunye obuphumeleleyo obuye bangela ukudala inani leemveliso kunye neZisombululo se-OEM ngenjongo yokuxhamla abathengi beenkampani zombini. nge NewTek, Ubuchopho buxhasa I-IP eyenziwa nge-software workflows usebenzisa NewTekI-Network Network Interface (NDI ™). Kwaye nge-Blackmagic, i-Brainstorm ilindele ukwakha ukucwangciswa okudibeneyo ukubonisa isisombululo esisezantsi esineziphumo zokushicilela umveliso.
I-Brainstorm yinkampani yecandelo elinikezelwe ukubonelela i-graphics-3D iifayile kunye nezisombululo ezisezantsi zokusasazwa, ukuveliswa kwemifanekiso yefilimu kunye neentetho zenkampani. I-Brainstorm inamathuba angaphezu kwamaziko e-2,500 emhlabeni jikelele ukususela kwisiseko sayo kwi-1993, kuquka nabaninzi abasasazwayo behlabathi kunye nezitishi ezincinane kunye nezommandla. Www.brainstorm3d.com
Iinkcukacha ezithe xaxe:
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa okanye imifanekiso echanekileyo nceda uqhagamshelane no-Amaya González Press@brainstorm3d.com
Paul Rodriguez1952-2017 - Oktobha 1, 2017
I-brainstorm iphakamisa i-Realhood Incredible, i-Graphics kunye neSetek-based based Solutions - Meyi 30, 2017
I-VideoCAVE, i-Mixed Reality application - Meyi 30, 2017
Iifayile ze3D Isicelo seMixed Reality Ukwenyuka kwamaxabiso kunye nezisombululo Brainstorm Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli InfinitySet 3 ukudityaniswa I-isovideo, i-viarte, i-HDR, ukunciphisa ingxolo, i-HDR / i-WCG, i-HEVC / AVC, i-HEVC, i-JCT-VC, i-2015, ukunciphisa i-bitrate, immersive, i-UHD / i-4K / i-HD, i-H264 / i-H265, i-Warsaw Inkxaso ye-Mixed Reality hardware njenge-Oculus Rift Inkundla ye-Ultra HD Injini yeVidiyo IvidiyoVIDE Isisombululo esilungileyo	2017-05-30
Previous: I-VideoCAVE, i-Mixed Reality application
next: Injini yeNjini yeNjini
Hey Buddy !, Ndiyifumene le ngcaciso: "Ubunzima bobuchule buphucula ubuNtu boNyango obungathandabuzekiyo, iIgraphics kunye neSetek-based based Solutions". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/brainstorm-enhances-its-editional-reality-graphics-and-template-based-solutions/. Enkosi.